"OPDOn Qeerroo Addaan Qoqqooodu Bira Dabartee Foollee Abbaa Gadaas Addaan Qoodu Jalqabdee Jirtii Kichuu
HomeAfaan OromooTV“OPDOn Qeerroo Addaan Qoqqooodu Bira Dabartee Foollee Abbaa Gadaas Addaan Qoodu Jalqabdee Jirtii
Foolleen abbaa gadaa odaa roobaa magaalaa gindhiir hatattamaan haaromfamuu qaba. Qeerroon kan qabsaaheef kan lubbuu ofii wareegeef sabaaf malee networkiin OPDO Jalatti ijaaramee hojii qeerroo awwaaluufii miti. Maqaa foolleetiin ijoolleen yeroo ammaa socho’an hawaasa kan bakka hin buune tahuun akka beekkamu Itti Nuuf Dhaami.
“Tokkummaan teenna hin tuqamin jennee dhugaa jirtu osoo garru numa sirreeffatan jennee namoota qabsoo keessatti gahee takka hin qabne kan guyyaa tokko qeerroo waliin dhakaa karaarra kaahee hin beeyne maqaa foolleetiin ofirratti fillee osoma dhamaanu OPDOn namoota sanitti fayyadamuun osoo qeerroo magaalaa hin mariisisin dhoksaan maqaa Jaraa erguun muudanii ergataa jiru. Kanarraa kan ka’e shakkiin qeerroo jiddutti uumamuu eegale Jiraa ammas sababa hin haaromfaminiif dhibeen kun furamuu hin dandeenne. Diinaaf hulaa hin bannu jennee caldhisnee bu’aa qabsoofneef of harkaa dhabaa jirraa.
Yeroo Amma Foolleen OPDOn Magaalaa Gindhir Irraa
Leenjif Ergatte Kunis Garaagarummaan qeerroo jiddutti akka babaldhatuuf shoora guddaa taphachaa jiraachuu isaanii waan beekameef qeerroon tokkummaa keessan kan duraanirra jabeessuun akka cimuu qaban itti nuuf himi.”
ONN LIVE: QOPHII ADDAA: Marii hayyoota Oromoo Pro. Mahaammad Hassan, pro Asaffaa Jaallataa fi Pro. Asafaawu Bayyanaawaliin godhamee.Hagayya 13 2018